Fadeexadda Sonkorta laga Dhoofiyo Somalia ee la Galiyo Kenya oo Meel sare Gaartay – Radio Daljir
Fadeexadda Sonkorta laga Dhoofiyo Somalia ee la Galiyo Kenya oo Meel sare Gaartay
Nofeembar 12, 2015 1:31 b 0
Somalia, November 12, 2015-(Daljir)_ Warbixin ay maanta soo saareen Koox Suxufiyiin Kenyan oo lagu magacaabo “Journalists for Justice rights group” ayaa waxaa lagu ogaaday in Hawlaha sida qarsoodiga Sonkorka ka soo degto Dekedda Kismaayo loogu gudbiyo xuduudka Kenya ay faa’ido ku qabaan Ciiddanka Kenya.
Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay inay Xarakadda Alshabaab ee xiriirka la leh Ururka Alqaacida ay ka macaashaan Lacagaha ay ka helaan Gaadiidka lagu daabulo Sonkorta Kontorobaanka, isla markaana ay Kharajkaasi u adeegsadaan Hawlgalka Dagaal ee ay kula jiraan Dowladda Somalia iyo Hawlgalka AMISOM.
Warbixinta oo asaas looga dhigay Cilmi-baaris dhowr bilood ka socotay gudaha Somalia iyo Kenya, oo ay ku jireen Wareysiyo lala yeeshay Saraakiil ka tirsan QM, Ciiddanka Kenya, Ilo Sirdoonka Reer Galbeedka, Ganacsatadda Sonkorta, Xaamilayaasha iyo Dareewalladda kaxeeya Gaadiidka lagu daabulo Sonkorta Kontorobaanka.
Warbixinta waxaa kaloo lagu xusay in Maamulka Jubbaland iyo Xarakadda Alshabaab ka wada qaataan Canshuur gaadiidka Dhuxusha iyo kuwa Sonkorta ee isaga kala goosha Kismaayo ilaa xuduudka Kenya ee Dhobley Liboy.
Warbixinta waxay ku eedeysay Sarkaal sare oo ka tirsan Milliteriga Kenya inuu ku lug leeyahay Shabakadda ka shaqeysata Sonkorta Kontorobaanka loo geliyo Kenya.
Sarkaalkaasi ayaa la sheegay inuu Badbaad iyo Iskaashi aan la shaacinin la leeyahay Hoggaamiyayaasha Siyaasadda ee Kenya.
Kooxda Suxufiyiinta soo saartay Warbixinta waxay sheegeen in Kharajka guud ee laga helo Sonkorta Kontorobaanka lagu geliyo Kenya kharaj u dhexeeya 200 million oo Dollar ilaa 400-million oo Dollar.
Baaritaanka waxaa kaloo lagu ogaaday inay Ciiddanka Kenya ay canshuur ka qaataan Loor kasta oo Sonkor oo laga soo dejiyo Dekedda Kismaayo iyo kuwa loo sii raro gudaha dalka Kenya.
Kharajka ay Ciiddanka Kenya ka helaan Canshuurtaasi ayaa la sheegay inay sannadkiiba uga soo xerooto lacag dhan 50-million oo Dollar.
Warbixinta Suxufiyiinta Xuquuqda Caddaaladda “Journalists for Justice rights group”waxay ku eedeeyeen Ciiddanka Kenya inay si baahsan u geystaan Tacadiyo ka dhan ah Xuquuqda Aadanaha, o oay ku jirto Kufsi, Jirdil, Xarig iyo duqeyn dhinaac Diyaaradaha oo lala beegsaday goobaha ay isugu yimaadaan dadka badan iyo Xoolaha, halkii ay ka duqeyn lahaayeen Xerooyinka lagu tababaro Dagalaamayaasha Xarakadda Alshabaab.
Dhinaca kale, Afhayeenka Ciiddanka Kenya, Kolonel David Obonyo waxa uu beeniyey Eedeymahaasi, wuxuuna ku dooday inay Ciiddanka Kenya hawl adag ka hayaan Hawlgalka AMISOM.
Shirkadda Apple oo Raali-galin siisay Somali la Cansuriyeeyay
Olole lagu Hagaajinayo Bilicda Burtinle oo meel wacan maraya